नक्कली लाइसेन्स बिक्री गरेरै भक्तपुरमा साढे दुई तले घर ! – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठसमाचारनक्कली लाइसेन्स बिक्री गरेरै भक्तपुरमा साढे दुई तले घर !
नक्कली लाइसेन्स बिक्री गरेरै भक्तपुरमा साढे दुई तले घर !
प्रहरीले भक्तपुर मध्यपुर ठिमी नगरपालिका-६ बाट मंगलबार एक पुरूषलाई पक्राउ गर्‍यो।
पक्राउ पर्ने सिन्धुपालचोक घर भई ठिमी बस्ने २८ वर्षीय आशिष गिरी थिए।
उनलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ गरी उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न महाशाखाले महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा बुझाएको छ। प्रहरीले उनलाई नक्कली लाइसेन्स बिक्री वितरण गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो।
उनले केही वर्षदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बिक्री गर्ने काम गर्दै आएका थिए। यातायात कार्यलयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ट्रायल नै नदिई अनुमति पत्र बिक्री गर्ने गरेको हुन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ।
उनले लाइसेन्सको ३० हजारदेखि सवा लाखसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ। ‘उनले सकेसम्म बढी बार्गेनिङ गरेर पैसा लिने गरेको रहेछन्,’ भक्तपुर प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सुवास बुढाथोकीले भने, ‘सबैभन्दा धेरै उनले सवा लाखसम्म लिने गरेको पाइयो।’
उनका अनुसार गिरी १० वर्षअघि भने सहचालक थिए। पछि उनले यातायात कार्यालयमा सानातिना कामहरू गर्न थालेका थिए। प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘करिब तीन वर्षदेखि भने उनले लाइसेन्स बेच्ने काम सुरू गरे।’
उनलाई प्रहरीले मंगलबार हुन्डाई कम्पनीको आई-२० बा १५ च ४६८४ नम्बरको कारसहित पक्राउ गरेको थियो। त्यहीँबाट प्रहरीले ३८ वटा नक्कली लाइसेन्ससमेत फेला पारेको थियो।
उनले प्राय: मृतक र म्याद गुज्रेर खारेज भएका लाइसेन्स नम्बर यातायात कार्यालयबाट लिने गर्थे। पछि सोही नम्बरबाट नक्कली नयाँ लाइसेन्स बनाएर बिक्री गर्ने गरेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए।